Isithili ‘Esincinci SaseHaiti’ Siza eBrooklyn kwisiXeko saseNew York - Ezopolitiko
Eyona Ezopolitiko Isithili 'saseHaiti esincinci' siza kwisiXeko saseNew York
Isithili 'saseHaiti esincinci' siza kwisiXeko saseNew York
Umfazi uyakhwaza ngexesha loqhankqalazo olubizwa ngokuba yiRally Against Racism: Yima eHaiti naseAfrika kwi-NYC.UTIMOTI A. CLARY / AFP / Getty Izithombe
Yonke into eyimfihlo yesishwankathelo se-movie
Esi siCreole saseHaiti esincinci, ngoku esiza kwicandelo leFlatbush eBrooklyn ngohlobo lweShishini laseHaiti kunye neSithili seNkcubeko. Isithili siza kubhiyozela inkcubeko yaseHaiti kunye negalelo esixekweni naseMelika kwaye sikhuthaze uphuhliso lwezoqoqosho, inkcubeko, ubugcisa, iinkqubo zobumelwane kunye nokhenketho.
IBrooklyn likhaya lolona luntu lukhulu lwamaHaiti-Amerika eMelika ngaphandle kweFlorida.
Abantu abanemvelaphi yaseHaiti benza phantse Iipesenti ezingama-20 kubemi beCaribbean kwiFlatbush. IBrooklyn inabantu abangaphezu kwama-90,000 baseMelika baseHaiti-indawo yesithathu ephezulu eMelika, ngoku ka Iziko loMgaqo-nkqubo wokuFuduka, itanki lokucinga eliseWashington, D.C.
Malunga ne-190,718 yabantu baseHaiti phila Kwiphondo laseNew York, elinabantu abali-156,000 abahlala esixekweni, ngokwe-American Community Survey.
Umfazi waseBrooklyn uRodneyse Bichotte-owokuqala wase-Haiti-waseMelika onyulwe kwiNdlu yoWiso-mthetho yaseNew York esuka kwisiXeko saseNew York-ekhokele kwimizamo kunye neBhunga laseBrooklyn uJumaane Williams kunye neLittle Haiti BK Coalition ukufumana esi sikhundla. Uye wathi inani labantu baseHaiti abahlala kurhulumente bajongelwe phantsi, eqaphela ukuba inokuba ikho ukusuka kwi-500,000 ukuya kwi-800,000.
IHaiti encinci ayizukuphela kwendawo yokutyelela, utshilo u-Bichotte kwisibhengezo esisesikweni ngolwesiHlanu kusasa e-Flatbush. Iya kuba ngumbhiyozo wenkcubeko yaseHaiti kunye nokwamkelwa kwegalelo laseHaiti kweli lizwe. Ndifuna ukugxininisa ukuba le projekthi ayenzelwanga ukwahlulahlula. Yenzelwe ukudibanisa.
Ukuchongwa kuya kubandakanya indawo ekumda weAvenue H, iBrooklyn Avenue, iParkside Avenue kunye ne-East 16th Street kwaye izakubandakanya neCawa Avenue phakathi kweBrooklyn neAlbany Avenues.
Nje ukuba iBhunga lesiXeko liphumeze isigqibo, ishishini lase-Haiti elincinci kunye nesithili senkcubeko ziya kufana ne-Little Italy eManhattan. Oku kunokwenza kube lula ukufumana iimvume kunye nokuvumela ukwenziwa kweziko lenkcubeko kunye nemyuziyam, kunye nokwakhiwa kwesikhumbuzo.
Kwaye iLittle Haiti ngoku iya kufaneleka ukuba icele inkxaso-mali ebekelwe amanyathelo enkcubeko kunye namashishini. Esi sixeko siza kuba nokuqonda okungcono malunga nalapho kufuneka sabele khona izixhobo ezilungiselelwe abantu base-Haiti-baseMelika ezinje ngeenkonzo zokufudukela kwelinye ilizwe okanye iipakethi zolwazi eziguqulelwe ngesiCreole.
Inzame yokuseka iHaiti encinci kwiFlatbush yadibana ukuxhathisa okuthile .
Kwi-2017, isithili esincinci senkcubeko seCaribbean senzelwe indawo ekumda weFlatbush, iCawe kunye neNostrand Avenues, yiyo loo nto ekhokelela ezinye iinkokheli zalapha ukuba zithi isithili saseHaiti sasingeyomfuneko.
U-Bichotte ugcinile ukuba ukutyunjwa kuya kunceda ukuphakamisa uluntu lwaseCaribbean kunye nolunye uluntu. Uye walatha kwizicwangciso zokwakha amatye ezikhumbuzo azakukhumbula iinkokheli zeCaribbean ezinje ngoDutty Boukman, inkokheli yoHaitian Revolution, eyaqala ngo-1791 ukuya ku-1804.
IGuyana encinci, iBichotte iyaqhubeka. Ndikwatsho iTrinidad encinci. Ndikwatsho nePakistan. Ndikwatsho i-India encinci, kwaye uluhlu luyaqhubeka kwaye luqhubeke njalo kuba sifuna iSixeko saseNew York ukuba sithi siyabamkela abantu baseHaiti kunye nabo bonke abavela kwiCaribbean, ngakumbi xa imigaqo-nkqubo yokungena kwamanye amazwe ngokungekho sikweni igxotha abantu bethu baphuma kuluntu lwethu njengabantu baseHaiti Ubume obuKhuselweyo bexeshana.
URosemonde Pierre-Louis, usihlalo kunye nomseki-mbumba weHaiti Roundtable, umbutho woluntu owenziwe ziingcali zaseHaiti naseMelika, uthe isithili esitsha sivumela abantu baseHaiti ukuba babhiyozele ookhokho babo.
Namhlanje kuphawula umzuzu omangalisayo kwimbali yethu, utshilo uPierre-Louis. Ixesha elide, sichithe ixesha livumela ukuba ibali linikezelwe kwabanye. Kule minyaka imbalwa idlulileyo, sichithe ixesha… ukuphinda sichaze ibali kwaye sibalise ibali lethu ngawethu amazwi.
Abantu baseHaiti benze igalelo elibalulekileyo e-United States, kubandakanya nendima abayidlalileyo ekuthengweni kweLouisiana ngo-1803, kunye namakhulu amajoni amaHaiti angamavolontiya alwa kwi-American Revolution. Kwabekwa ilitye lesikhumbuzo eSavannah, eGeorgia ukuhlonipha igalelo labo.
Usekela wamaPhulo oMgaqo-nkqubo weQhinga uPhil Thompson, obemele uSodolophu uBill de Blasio, uthe usodolophu ulungele sonke isithili esitsha.
Uye waphawula ukuba iHaiti encinci ibaluleke kakhulu kwiHaiti enkulu kwaye wathi i-Haitian Revolution yayijongene nenkululeko yeebhiliyoni zabantu kwaye i-United States ngekhe iye kwintshona yoMlambo iMississippi ngaphandle koguquko.
Usapho lwam kwasekuqaleni luvela eDurham, eMantla Carolina, nakwiminyaka engama-200 eyadlulayo, uluntu oluntsundu eDurham, abantu abantsundu abakhululekileyo babiza uluntu lwabo ngokuba yi-'Haiti encinci, 'utshilo uThompson.
IBhunga laseBrooklyn uJumaane Williams, isizukulwana sokuqala saseBrooklyn selifa lemveli yaseGrenadia, wakhomba kwimingeni abantu baseHaiti nabaseAfrika abajongana nayo, esalatha unxibelelwano lwabantu base Haiti kwilizwekazi.
Ukuba ujonga into eyenzekileyo kunyaka ophelileyo okanye emibini, abahlali bakhethelwa ngaphandle kwaye babizwa ngokuba zii-shitholes ngumongameli wase-United States of America, U-Williams uthe. Elinye lala mazwe yiHaiti. Xa uluntu luphakama luthi siza kuphinda sibuyele kumbono wethu, kufuneka sibhiyozele.
Kwaye wabiza igama ukuba lusuku lokuzingca kubo bonke abantu abamnyama, esongeza ukuba lulongezo olwamkelekileyo eLittle Caribbean.
Ndibhiyozela iCaribbean encinci, kodwa ndiyazi ukuba xa ndingena kule mida, nangona ndikwiLittle Caribbean, umculo uza kutshintsha, ulwimi luya kutshintsha, ukutya kuyakutshintsha, kwaye ndonwabile ukubhiyozela indalo kwesi sithili senkcubeko namhlanje, uWilliams uqhubeke. Ndingavuya kakhulu ukubhiyozela nayiphi na enye indalo esinayo. Ndiya kuvuya ukubhiyozela i-Little Caribbean.
Ugqirha Ron Daniels, umsasazi we-Afrika-wase Melika owayesasaza intetho ekwangumgqatswa ozimeleyo ngo-1992 kwaye wasebenza kwiphulo lika-Jesse Jackson lokulwela amalungelo oluntu, wathi eli gama libalulekile kuba iHaiti yasibuyisela isidima sethu xa sasikwilizwe lethu. amadolo.
Sonke sinetyala elikhethekileyo eHaiti, utshilo uDaniels. Yiloo nto. Sonke, nokuba siphi na, sinetyala elikhethekileyo eHaiti… naphina apho sikhona ehlabathini namhlanje, iHaiti yasibuyisela isidima sethu.
Ukutyhilwa ngokusesikweni kwesithili esitsha kungqamane noSuku lweFlegi yaseHaiti, iholide ephambili kuluntu lwaseHaiti.
I-Haiti kunye nezinye iinkokheli zeCaribbean kunye nabenzi bomthetho baphinde batyhila umqondiso omtsha weToussaint L'ouverture Boulevard, ezakubekwa ecaleni kweNostrand Avenue. UToussaint L'Ouverture wayeyinkokeli ephambili yenguqulelo yaseHaiti.
Iinxalenye zeRogers Avenue ziya kuthiywa ngokutsha ngegama likaJean-Jacques Dessalines, inkokeli yoHlaziyo yaseHaiti.
UKenneth Mbonu, umlawuli olawulayo weSithili seFlatbush Junction Business Improvement District, ukhumbule ukuya kwisifundo sombhali-mbali eConnecticut kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo apho umbhali-mbali ebengazukuvuma igalelo le-L'Ouverture.
Ubuzile ukuba ukhona umntu onemibuzo ndaphakamisa isandla ndaza ndathi, ‘Ngaba uyazi - uyayazi ngeToussaint L’Ouverture?,’ Utshilo uMbonu. 'Uyazi ukuba ngaphandle kwakhe nento ayenzileyo kumkhosi waseFrance waseNapoleon, iNew Orleans ngekhe ibekho?' Kwaye wathi, 'Leyo yingxoxo yolunye usuku.' Kodwa apho ndivela khona [kukuba] kubaluleke kakhulu ukuba siyazi imbali yethu.
I-17 yoVavanyo olude lweVibrator yaBasetyhini, amaDoda kunye namaQabane
UChristie Brinkley Akakhathali yeyiphi iHamptons Homes yakhe ayigcinayo
Ukutya i-Du (pre): I-Spitzer's yangaphambili ye-Courtesan Ufumene i-Bun kwi-Oven kunye nenye indoda eyayitshatileyo ukuba ibize eyayo
Ukukhumbula uClaudia Cohen: Oyena Mamkeli weGossip yeyona Ndoda inesisa nayo yayilungile ngokwenyani
Eyona ndlela ikhuselekileyo yokunciphisa umzimba
U-erinn hayes kevin unokulinda
Indoda yokugqibela emhlabeni ibuya ngomhla
Igubu le-50 legaloni ye-lube
Iimbumba zeenkwenkwezi zeenkwenkwezi zeofisi
Ukuthandana kwabantu abadala abangaphezu kwe-70